आज एकैदिन ३१४ जना संक्रमित थपिए, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस् – live 60media
नेपालमा सोमबार थप ३१४ जनामा कोरो’ना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशा’लामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप ३१४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
सोमबार देशका विभिन्न स्थान’का प्रयोगशालामा ग’रिएको परीक्षणमा २ सय ९४ जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने अन्य महिला छन्।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटन’गरमा गरि’एको परीक्षणमा झापाका ६, सुनसरीका १ र मोरङका ९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भए’को छ। यस्तै कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा झापका ३, सप्तरीका ६, पाँचथर स्थायी ठेगाना भई मोरङमा रहेका १ जना, र बलानबिहुल नगरपालिका सप्तरीका १६ जनामा पनि कोरोना संक्रम’ण पुष्टि भएको छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनक’पुरमा गरिएको परीक्षणमा भने १६ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ। तर उनीहरू कुन कुन जिल्लाका हुन् भन्ने चाँहि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जा’गेश्वर गौतमले खुलाएनन्।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्ष’णमा स्याङ्जा र कास्कीका एक एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। यस्तै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्ष’णमा पर्साका ८, बाराका ७ र रौतहटका ४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरि’एको परीक्ष’णमा ४ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ। उनीहरू चारैजना दाङकै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेस्थित भेरी अस्पतालको प्रयोग’शालमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका १ र बर्दियाका १८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
सुर्खेतको प्रयोगशालामा दैलेखका १०, सल्यानका ५ र सुर्खेतका १ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको प्रव’क्ता डा गौतमले जनाए।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा गरि’एको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका ३१, गुल्मी स्थायी ठेगाना भएका १, कपिलवस्तुका १७, पाल्लाका १ जनामा कोरोना संक्रमण भए’को छ। यस्तै सोही प्रयोगशालामा प्युठानका केहीस’हित रुपन्देहीका १५ जनामा पनि कोरोना संक्रमण भएको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। उनीह’रूमध्ये कति जना प्युठानका हुन् र कति जना रुपन्देही’का हुन् भन्ने पनि प्रवक्ता गौतमले खुलाउन बिर्सिए।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परी’क्षणमा कपिलवस्तुका ७, महोत्तरीका १२, रौतहटका ७ र सर्लाहीका १०६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गौतमले जानकारी दिए।
थपिएका ३१४ सहित नेपालमा संक्र’मितको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ पुगेको प्रवक्ता डा गौतमले जानकारी दिए। नेपालमा हालसम्म ४८८ जना उपचारपछि निको भएका छन्।प्रवक्ता डा गौ’तमका अनुसार हालसम्म देशका ७१ जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। – नेपाल लाईभ ( साङ्केतिक फोटो)
← अझै बढ्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ आजको सुनको भाउ
बाबुले भने : ‘मैले साउन देखि छोरीसँग नियमित सम्पर्क गर्दै आएको हुँ, पेटमा भएको बच्चा मेरै हो’ ! अस्पतालमा भएकी छोरीको बयानले आमा झस्किन ! →